Accueil > Gazetin'ny nosy > Volaben’ny Praiminisitra voaroba: Azo tamin’ny kiloadoaka ka mivoaka amin’ny makarakara
Volaben’ny Praiminisitra voaroba: Azo tamin’ny kiloadoaka ka mivoaka amin’ny makarakara
Tsy 800 tapitrisa ariary araka ny vaovao nivoaka teto amin’ny La Gazette de la Grande Ile omaly ny volan’ilay mpikambana ao amin’ny Governemanta monina eny Ivato voaroba fa 12.000 tapitrisa ariary na 12 miliara ariary araka ny fanampim-baovao fantatra.
Io mpikambana ao amin’ny governemanta voaroba vola io moa dia ny Praiminisitra MAhafaly Olivier Solonan-
drasana. Tsy fandroban-jiolahy no nitranga, raha ny akom-baovao ihany, fa ny mpiasa tao an-tranon’Ingahy Praiminisitra ihany.
Niteraka fanehoan-kevitra maro izay tranga izay omaly tontolo. Tao ny nanipika fa na tsy fanao aza ny manenji-dresy dia tsy azo atao ny mikombom-bava amin’ny tranga toa ireny.
Ny habetsahan’ilay vola notehirizina tao an-tokantrano aloha dia efa nahalasa fisainana ny maro. Angaha ianao raha Praiminisitra, hoy ny hafa, dia manantena fa ho voaaron’ireo mpiambina anao? Tokony praiminisitra aza no tarafin’ny olona amin’ny fampiasana ny rafitra rehetra misy eto MAdagasikara, toy ny banky mba hitehirizam-bola, hoy ny sasany. Tao koa ny nanipika fa “matahotra ny ho fantatra ny olona ny volabe tsy fanta-piaviana azony ka naleony nisafidy ny hitahiry izany tao an-tranony, nefa dia izao nidiranandro izao”, hoy ihany koa ny hafa.
Fa ny tena nanaitra dia ny fahasahian’ny olona sasany nanasokajy an’iny volabe voaroba tao an-tokantranon’i Solonandrasana Olivier Mahafaly iny ho “vola tsy madio”. Avy ahtrany dia nisy ny naipika fa “tsy maintsy toa ireny ny fisehony satria azo tamin’ny kiloadoaka ka tsy maintsy mivoaka amin’ny makarakara”. Izany hoe vola azo tsy tamin’ny alalan’ny fahamarinana ka verivery fotsiny tsy amin’antony.
Mba misy tompon’andraikitra manam-pahefana afaka manao famotorana ve ny niavian’izany volabe izany satria raha olom-pirenena tsotra no ahitana vola toa izany, na any amin’ny banky na any antokantranony, dia tsy maintsy iantefan’ny famotorana hoe “avy aiza izany volabe izany” ? Indrindra fa tompon’andraiki-panjakana ambony izy, ka sanatriavin’ny vava ve mety ho nalaim-panahy hanilika tao amin’ny kitapom-bolam-panjakana ?
Fa nisy koa ny lasa ahiahy hoe “sanatriavin’ny vava, sao dia takalon’ny vola avy amin’i Houcine Alfa ka sandan’ny nampandosirana azy izany vola notehirizin’i Solonaadrasana Olivier Mahafaly tany an-tokantranony izany, izay voaroban’ny sasany koa taty aoriana ?”
Raha tena misy ny famotorana, ho hita ve ny tena marina momba ny fiavian’izy io ?